UShoes akasalali kuboza iBafana - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto UShoes akasalali kuboza iBafana
June 14 2012 at 11:14am Comment on this story
ANGASE athole ithuba lokuqala umdlalo uTokelo Rantie uma iBafana Bafana seyibhekene neGabon emdlalweni wobungani eMbombela Stadium, eMpumalanga, kusasa ngo-8.30 ebusuku.
Isithombe: GALLO IMAGES
MALIBONGWE MDLETSHE Ebika eseMbombela AYISABAZI ngisho nobuthongo inkakha kanobhutshuzwayo yakuleli, uJohn ‘Shoes’ Moshoeu, ngenxa yokuboza kweBafana Bafana elengelwa yimpinda yewa lokuhluleka wukuzibekisela indawo eNdebeni yoMhlaba ezoba seBrazil ngo-2014. IBafana, okuyimanje icijwa ngumqeqeshi obambile uSteve Komphela, isethubeni elibi lokuhluleka ukuzicoshela ithikithi elibheke eBrazil kulandela ukudlala ngokulingana namazwe angenamlando otheni ebholeni i-Ethiopia neBotswana emidlalweni yayo yokuqala lolu hambo. “Angikwazi ngisho ukulala. Ungalala kanjani nje izwe lisha?” kukhala le nkakha. UMoshoeu uthe akekho umqeqeshi olungele ukuqeqesha iBafana kulesi simo ekuso njengamanje. Ebuzwa ukuthi yena angalithwesa bani ijoka lokuqeqesha leli qembu lesizwe emzabalazweni wokuzibekisela indawo eNdebeni yoMhlaba ezayo kwazise iSafa imatasa kuyimanje ihlola uKomphela, Gavin Hunt, Neil Tovey, Shakes Mashaba noGordon Igesund othwelwe ngeqoma ngabalandeli, uMoshoeu uthe kuzothanda ukuba nzima kozothatha. “Umuntu okumele athole lo msebenzi kumele kube ngumuntu esizomeseka thina njengeNingizimu Afrika. Kuzomele simsize futhi sime ngemuva kwakhe noma sekunjani ngoba sinqoba njengesizwe siphinde sidliwe njengesizwe. Ngike ngakusho lokhu ngaphambi kokufika kukaParreira (Carlos Alberto waseBrazil), olethe uSantana (Joel naye waseBrazil) waphinde wabuya, ukuthi sifuna umuntu ozonyusela leli zwe phezulu lapho lifanele ukuba khona,” kusho yena. UMoshoeu uthe akanandaba noma lowo mqeqeshi kungaba owakuleli noma owaphesheya kodwa nje uma ezonyusela uMzansi ezingeni elihloniphekile ebholeni lase-Afrika nelomhlaba. Uthe: “Kimina akunamsebenzi ukuthi ungowakuleli noma owangaphandle yini umqeqeshi esimqashayo inqobo nje uma ezokwazi ukunyusela leli zwe phezulu.” Le nkakha, eyaduma kuKaizer Chiefs nangokwenza ubulungiswa enkundleni isagqoka unombolo-10 eqenjini lesizwe, ithe inkinga ayiqali nje kuBafana neSafa kodwa umnyombo wayo ngabantu baseNingizimu Afrika uqobo. “Inkinga yethu ayiqali nje kuBafana kodwa iqala ezinhlakeni zethu zezinkulisa ezintekenteke. Ukube kuya ngami ngabe sineligi ka-Under 21 noma nje ezophelela ezifundazweni. Lapho kuzotholwa khona abadlali abanohlonze baka-Under 20 baye ku-Under 23 nakuNational First Division baze bafike kuBafana. Ngabe asinayo le nkinga enkulu kangaka,” kusho uMoshoeu. IBafana izodlala umdlalo wobungani neGabon eMbombela Stadium, eMpumalanga kusasa ngo-8.30 ebusuku. Kulo mdlalo bazobe bengekho oThanduyise Khuboni, Oupa Manyisa, Katlego Mphela, Bongani Khumalo nokaputeni uSteven Pienaar kulandela ukuba uKomphela ebakhululile ekhempini ngoMsombuluko. Kubhekwe ukuthi kuqale uTokelo Rantie no-Eleazer Rodgers njengoba sekucacile emidlalweni emibili eyedlule yeBafana ukuthi uMphela noSiyabonga “Bhele” Nomvete abakatholani kahle. n Khonamanjalo usihlalo weTechnical Committee yeSafa uFana Sibanyoni uveze ukuthi inhlokhono obekufanele iqale izolo ngesikhundla somqeqeshi weBafana ihlehliselwe inamuhla. “Sinqume ukuthi bonke abaqeqeshi bazonikwa amahora amabili emunye namuhla ngaphandle kukaSteve Komphela osekhempini yeBafana. Sifuna ukuqala ekuseni kakhulu,” kusho uSibanyoni. UKomphela uzohlolwa ngoLwesibili. Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / UShoes akasalali kuboza iBafana We like to make your life easier